Tenga Spaghetti Strap Bandage V-mutsipa Backless Split Satin Kupfeka - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
Spaghetti Strap Bhandige V-mutsipa Backless Split Satin Kupfeka
ruvara semufananidzo 3 Semufananidzo semufananidzo 2
semufananidzo 3 / S semufananidzo 3 / M semufananidzo / XL semufananidzo / XXL semufananidzo 3 / XXL semufananidzo 3 / L semufananidzo 3 / XL semufananidzo 2 / L semufananidzo 2 / XL semufananidzo 2 / S semufananidzo 2 / M semufananidzo / M semufananidzo / L semufananidzo 2 / XXL semufananidzo / S
Spaghetti Strap Bandage V-mutsipa Backless Split Satin Kupfeka - semufananidzo 3 / S. yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Muenzaniso Nhamba: 19936
Cherechedza: Ndapota tevera zvakanakira chidimbu chechirairo kuti usarudze hukuru. Usasarudza zvakananga maererano nemaitiro ako. Kunyange zvakadaro hauna chokwadi nezve saizi? Tinoda kuda kuraira zvinoenderana nezviyero zvako zvekuputika, chiuno, uye chiuno. Iyo saizi inogona kuve ne 2-3cm misiyano nekuda kwechiyero chebhuku. Ndokumbira utarise kana iwe wayera. Iyo pfungwa yekutonhora maoko maoko ekugeza. Inogona kubatsira zvinhu kuchengeta chimiro chavo.
Yakanaka kwazvo, jira racho ndere mhando yakanaka, chenjera kuti harisi dema asi bhuruu rebhuruu
Nguo yacho yakanaka. Ruvara rwakasiyana nemufananidzo wemutengesi, akarayira mint, akauya zvinyoro bhuruu, asi zvakare akanaka. Maitiro ekunhuwa, chiuno chakasununguka. Inosanganisira bhandi. ⠀ Saizi S, pamatanho angu 83-65-89 musha wakanaka, unokodzera maparamende mahombe. Ndakafarira zvinhu, zviri pakati nepakati, hazviite magetsi, izvo zvakakosha.